Okulandelayo | Inqubomgomo yobumfihlo
I-Synthesis at Work Inc., i-dba Cheryl Cran kanye ne-NextMiling ayiqoqanga imininingwane ekhonjwayo ngawe uma uvakashela Iwebhusayithi yethu ngaphandle kokuthi unikeze ngokuzithandela lolu lwazi, ngokwesibonelo ngokuxhumana nathi ngamafomu ethu e-imeyili, kubandakanya nokusithumela imibuzo. Ngeke sabelane ngemininingwane yakho nanoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle kwenhlangano yethu, ngaphandle kwesidingo sokugcwalisa i-oda lakho.
Ungakhetha ukuphuma kunoma yikuphi ukuxhumana nabo okuzayo okuvela kithi nganoma yisiphi isikhathi. Ungenza okulandelayo nganoma yisiphi isikhathi ngokuxhumana nathi ngekheli le-imeyili noma inombolo yocingo enikezwe kuwebhusayithi yethu. Imininingwane yomuntu eqoqwe kulezi zimo ingafaka igama lakho, imininingwane yokuxhumana, ikheli le-imeyili nenombolo yocingo. Asisoze sabelana noma sithengise imininingwane yakho kunoma ngubani.
Noma yimiphi imibuzo kufanele iqondiswe ku: info@nextmiling.com